Eyona, Eyomsintsi 2021
Eli phepha linolwazi ngeSentinel Spectrum ye ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Ulwazi olunikezelwe ngokubanzi lubandakanya oku kulandelayo:
Iimpawu zeSentinel Spectrum
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeSentinel Spectrum
Ulwalathiso kunye nolwazi lwedosi yeSentinel Spectrum
Olu nyango lusebenza kwezi ntlobo zilandelayo:
(milbemycin oxime • lufenuron • praziquantel)
Isilumkiso seSentinel Spectrum
Umthetho wase-Federal (e-USA) ulithintela eli chiza ukuba lisetyenziswe okanye ngokomyalelo wezilwanyana ezinelayisensi.
SENTINEL®ISITHUBA®iyafumaneka kumandla amane kwiiphakheji ezinekhowudi yolawulo lomlomo ezinjeni nakwiinjana ngokobunzima bazo. Itheyibhile nganye enencasa ehlafunwayo yenziwe ukuba inikeze ubuncinci be-0.23 mg / ipawundi (0.5 mg / kg) ye-milbemycin oxime, 4.55 mg / iponti (10 mg / kg) ye-lufenuron, kunye ne-2.28 mg / iponti (5 mg / kg) ye praziquantel.
I-Milbemycin oxime iqulethe ii-oxime derivatives ze-5-didehydromilbemycins kumlinganiselo we-80% A4(C32HIsineHAYI7, MW 555.71) kunye nama-20% A3(C31H43HAYI7, UMW 541.68). I-Milbemycin oxime ihlelwa njenge-anthelmintic ye-macrocyclic.
ILufenuron sisiphumo se-benzoylphenylurea ngezi zinto zilandelayo:17H8Cl2F8U-N2OKANYE3, UMW 511.15). Iikhompawundi zeBenzoylphenylurea, kubandakanya i-lufenuron, zihlelwa njengezinambuzane zophuhliso lwezinambuzane (IDIs).
I-Praziquantel yi-isoquinolone anthelmintic enegama leekhemikhali 2- (Cyclohexylcarbonyl) -1,2,3,6,7, -11b-hexahydro-4Hpyrazino [2,1-a] isoquinolin-4-one.
I-SENTINEL SPECTRUM ibonakalisiwe kuthintelo lwezifo zentliziyo ebangelwa I-Dirofilaria immitis; kuthintelo kunye nolawulo lwentakumba (Ikati yeCtenocephalides) kunye nonyango kunye nokulawulwa kweentshulube ezindala (Toxocara canis, Toxascaris leonina) , umntu omdala ookworm (Ancylostoma caninum) , whipworm yabantu abadala (Iimpungutye zeTrichuris) , kunye nentshulube ye tapeworm yabantu abadala (Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis kwaye I-Echinococcus granulosus) usulelo ezinjeni nakwimidlwane iiponti ezimbini zobunzima bomzimba okanye ngaphezulu kunye neeveki ezintandathu ubudala nangaphezulu.
Isisombululo seSentinel Spectrum kunye noLawulo
I-SENTINEL SPECTRUM kufuneka ilawulwe ngomlomo, kanye ngenyanga, kwiqondo eliphantsi le-0.23 mg / lb (0.5 mg / kg) milbemycin oxime, 4.55 mg / lb (10 mg / kg) lufenuron, kunye ne-2.28 mg / lb (5 mg / kg) ipraziquantel. Ukuthintela umbungu wentliziyo, nika kanye ngenyanga iinyanga ezi-6 ubuncinci emva kokuvezwa ziingcongconi (jonga UKUSEBENZA ).
I-Milbemycin Oxime ngokuhlafuna
ILufenuron nganye ehlafunwayo
yi-neurontin into elawulwayo
2 ukuya kwi-8 lbs.
8.1 ukuya kuma-25 lbs.
25.1 ukuya kuma-50 lbs.
50.1 ukuya kwi-100 lbs.
Ngaphezulu kwe-100 lbs.
Ukulawula indibaniselwano efanelekileyo yeetshizi
Ukuqinisekisa ukufakwa okwaneleyo, soloko ulawula i-SENTINEL SPECTRUM ezinjeni ngoko nangoko emva okanye ngokudibeneyo nokutya kwesiqhelo.
I-SENTINEL SPECTRUM inokuhanjiswa ngenja ngesandla okanye yokongezwa kwinani elincinci lokutya kwenja. Ezi zihlafunwayo kufuneka zenziwe ngendlela ekhuthaza inja ukuba ihlafune, kunokuba iginye ngaphandle kokuhlafuna. I-Chewables inokuqhekeka ibe ngamaqhekeza kwaye inikwe izinja eziqhelekileyo ezigwinya ziphatha ngokupheleleyo. Ukunyamekela kufuneka kuthathwe ukuba inja idla idosi epheleleyo, kwaye izilwanyana ezinyangiweyo kufuneka zigcinwe kwimizuzu embalwa emva kolawulo ukuqinisekisa ukuba akukho nxalenye yethamo elahlekileyo okanye eyaliwe. Ukuba kurhanelwa ukuba idosi ilahlekile, ukuphinda kunconywe kuyacetyiswa.
I-SENTINEL SPECTRUM kufuneka ilawulwe rhoqo ngenyanga ukuqala kwinyanga e-1 yenja yokuqala ukubonakaliswa ziingcongconi kwaye iqhubeke de kube ubuncinci iinyanga ezi-6 emva kwenja yokugqibela yexesha (jonga UKUSEBENZA ). I-SENTINEL SPECTRUM inokuqhutywa unyaka wonke ngaphandle kokuphazamiseka. Xa utshintsha usuka kwenye imveliso yothintelo lweentshulube usiya kwi-SENTINEL SPECTRUM, idosi yokuqala ye-SENTINEL SPECTRUM kufuneka inikwe kungaphelanga inyanga yedosi yokugqibela yemveliso yangaphambili.
Unyango kunye nokuThintela
Unyango nge-SENTINEL SPECTRUM ingaqala ngalo naliphi na ixesha enyakeni, ingakumbi ukuqala kwinyanga enye ngaphambi kokuba iintakumba zisebenze kwaye ziqhubeke rhoqo ngenyanga ukuphela kwexesha lentakumba. Kwiindawo apho iintakumba zixhaphake unyaka wonke, unyango lwenyanga nge-SENTINEL SPECTRUM kufuneka luqhubeke unyaka wonke ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukunciphisa ukubanakho kokuphinda kubekhona iintakumba, kubalulekile ukunyanga zonke izilwanyana ngaphakathi kwekhaya ngemveliso yokhuseleko lwentakumba evunyiweyo, njengoko kufuneka.
Unyango lwamathumbu kunye noLawulo lweCestode:
Izinja zinokuvezwa kwaye zinokosulelwa ziintshulube, iintshulube, imikhono kunye neentshulube ezirhubuluzayo unyaka wonke, nokuba ixesha okanye imozulu injani. Abaxhasi kufuneka bacetyiswe ngamanyathelo afanelekileyo okuthintela ukosuleleka kwakhona kwenja yabo zizifunxi-gazi emathunjini. Kungenxa yokuba ixesha langaphambi kwexesha le- Imultilocularis inokuba mfutshane nje ngeentsuku ezingama-26, izinja ezinyangiweyo kwiimpawu ezinokuphawulwa rhoqo ngenyanga zinokuphinda zichaphazele kwaye zichithe amaqanda phakathi konyango.
Akukho zingqinisiso zaziwayo ekusebenziseni i-SENTINEL SPECTRUM.
Ayisetyenziswanga ebantwini. Gcina oku kunye nazo zonke iziyobisi kude nokufikelela kwabantwana.
Unyango olunamayeza angaphantsi kwenyanga ezi-6 emva kokuvezwa kokugqibela kwiingcongconi akunakho ukubonelela ngothintelo olupheleleyo lwentliziyo (jonga UKUSEBENZA ).
Phambi kolawulo lwe-SENTINEL SPECTRUM, izinja kufuneka zivavanyelwe usulelo lwentliziyo lwentliziyo. Ngokokubona kwezilwanyana, izinja ezosulelekileyo kufuneka zinyangwe zisuse iintshulube zentliziyo yabantu abadala. ISENTINEL SPECTRUM ayisebenzi kubantu abadala D. ongenanceba .
Ukuthamba, ukushukunyiswa komzimba okwethutyana, njengokuphefumla kanzima, ukugabha, ukunyuka kwengqondo, kunye nokonwaba, kuye kwaphawulwa kwezinye izinja eziphathwe nge-milbemycin oxime ephethe inani eliphezulu lokujikeleza kwe-microfilariae. Ezi mpendulo zibangelwa kukukhutshwa kweprotein kwi-microfilariae efileyo okanye efayo.
Sukuyisebenzisa kwiinjana ezingaphantsi kweeveki ezintandathu ubudala.
Sukusebenzisa izinja okanye iinjana ezingaphantsi kweepawundi ezimbini zobunzima bomzimba.
Ukhuseleko lwe-SENTINEL SPECTRUM aluzange luvavanywe kwizinja ezisetyenziselwa ukuzala okanye ekuncanciseni abantu ababhinqileyo. Izifundo zenziwe nge-milbemycin oxime kunye ne-lufenuron kuphela (jonga UKHUSELEKO LWEZILWANYANA ).
Ezi mpendulo zilandelayo zichazwe ezinjeni emva kolawulo lwe-milbemycin oxime, lufenuron, okanye praziquantel: ukugabha, ukudakumba / ukonwaba, ipruritus, i-urticaria, urhudo, i-anorexia, ukuxinana kwesikhumba, i-ataxia, ukuxhuzula, ukuqaqamba, kunye nobuthathaka.
Ukunika ingxelo yeziganeko ezichasayo zeziyobisi, nxibelelana neVirbac kwi-1-800-338-3659 okanye i-FDA kwi-1-888-FDA-VETS.
Ngoncedo lobuchwephesha fowunela iVirbac e-1-800-338-3659.
Ulwazi loMnini okanye oNyanga izilwanyana:
I-Echinococcus multilocularis kwaye I-Echinococcus granulosus ziintshulube zentshulube ezifumaneka kwiicanids zasendle nakwizinja zasekhaya. Imultilocularis kwaye E. granulosus Unokusulela abantu kwaye ubangele isifo esibi (isifo se-alveolar hydatid kunye nesifo se-hydatid, ngokulandelanayo). Abanini bezinja abahlala kwiindawo apho Imultilocularis okanye E. granulosus Ezi ndawo zihlala zikhona kufuneka zifundiswe ngendlela yokunciphisa umngcipheko wokuba sesichengeni kwezi zifunxi-gazi, kunye nengozi yokuba sesichengeni kwinja yazo. Nangona i-SENTINEL SPECTRUM yayiyi-100% esebenzayo kwizifundo zaselebhu kwizinja ezichasene Imultilocularis kwaye E. granulosus , akukho zifundo zenziweyo ukubonisa ukuba ukusetyenziswa kwale mveliso kuya kunciphisa izehlo zesifo se-alveolar hydatid okanye isifo se-hydatid ebantwini. Kungenxa yokuba ixesha langaphambi kwexesha le- Imultilocularis inokuba mfutshane nje ngeentsuku ezingama-26, izinja ezinyangiweyo kumanqwanqwa aphawulwe ngelebile anokuphinda abe nakho kwaye achithe amaqanda
Kwisifundo esasilawulwa kakuhle elebhu, i-SENTINEL SPECTRUM yayisebenza ngempumelelo eyi-100% ngokuchasene nosulelo lwe-heartworm xa lwenziwa kanye ngenyanga iinyanga ezi-6 zilandelelana. Kwizifundo ezilawulwa kakuhle zaselebhu, akukho namnye idosi okanye idosi ezimbini ezilandelelanayo ze-SENTINEL SPECTRUM ebonelele ngempumelelo eyi-100% ngokuchasene nosulelo lwe-heartworm.
Unyango kunye noLawulo lweNestatinal Nematode kunye neCestode:
Ukupheliswa kwenqanaba labadala le-hookworm (Ancylostoma caninum) , intshulube (Toxocara canis, Toxascaris leonina) umbungu (Iimpungutye zeTrichuris) kunye neentshulube zentshulube (Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus, Taenia pisiformis) Usulelo ezinjeni lubonakaliswe kwizifundo ezilawulwa kakuhle zelebhu.
Uthintelo nolawulo lwentakumba
Kwizifundo ezilawulwa kakuhle, i-SENTINEL SPECTRUM yayisebenza ekuthinteleni amaqanda amafukane ekuqanduselweni, oko ke kubonelela ngolawulo lokuphuhliswa kwabantu (Ikati yeCtenocephalides) .
Kwisifundo esenziwe kwizinja ezili-117 ezinikezela nge-SENTINEL SPECTRUM, izinja ezili-113 (96.6%) zamkela imveliso xa zinikezelwa ngesandla ngokungathi ziyanyangwa, izinja ezi-2 (1.7%) ziyamkele kwisitya esinokutya, inja enye (0.9%) uyamkele xa ibekwa emlonyeni wenja, kwaye inja enye (0.9%) iyalile.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-humira
Kumda wesifundo sokhuseleko, iinjana ezingama-40 ezineeveki ezilishumi (i-10 kwiqela ngalinye) zazilawulwa nokuba yidosi ye-sham (0X) okanye idosi ye-1, 3, okanye i-5X eyona ithamo lininzi lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM kube kanye kwiiveki ezimbini zizonke zonyango. I-ataxia yexeshana, ukungakhathali, ukungcangcazela, kunye ne-salivation zabonwa kumaqela e-3X kunye ne-5X alandela idosi nganye kusixhenxe. I-Lethargy kunye ne-ataxia zazixelwa ngamanye amaxesha kwi-sham-dosed (0X) nakwiinja ze-1X. Iinyikima zaqwalaselwa kabini emva konyango kwiqela lonyango le-1X. Ukuhlanza kwabonwa kuwo onke amaqela onyango kodwa kwizigameko eziphezulu kumaqela e-3X kunye ne-5X. Kwidosi ye-5X, ukuphefumla nzulu kwaphawulwa kwizinja ezimbini kwaye inja enye yayingakwazi ukuma ilandele iidosi ezimbini ezahlukeneyo. Zonke iimpawu zeklinikhi zisonjululwe kwiiyure ezingama-24.
Kwinqanaba lesibini lokufunda ngokhuseleko, amantshontsho angama-64 aneeveki ezintandathu ubudala (i-16 kwiqela ngalinye) ancitshiswa ngethamo le-sham (0X) okanye 1, 3, okanye 5X elona nani liphezulu le-SENTINEL SPECTRUM ngeentsuku 1, 15, 29, no-43. Imilenze yangemuva echithiweyo yaqwalaselwa kwaba kanye kwinja enye kwiqela lonyango le-5X. Ukuhlanza kwabonwa kwiqela lonyango le-5X.
Kwi-SENTINEL SPECTRUM elona zinga liphezulu elisekwe kwimveliso yedosi yi-2.5 mg / kg ye-milbemycin oxime, 50.7 mg / kg ye-lufenuron kunye ne-25.1 mg / kg ye-praziquantel, ephezulu kuneyona dosi isebenzayo esetyenzisiweyo kwizifundo zokhuseleko ze-milbemycin oxime kunye lufenuron (jonga ngezantsi).
Izifundo ezibini zenziwa kwizinja ezinesifo sentliziyo ezanyangwa nge-milbemycin oxime. Ukuthamba, ukusabela okwexeshana kwe-hypersensitivity kwajongwa kwizinja ezinobalo obuphezulu be-microfilariae (jonga UKULUMKELA ).
Izifundo zokhuselo kwizinja ezikhulelweyo zibonise ukuba idosi ye-0.6X yeyona thamo liphezulu lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM, (1.5 mg / kg ye-milbemycin oxime), elawulwa yonke imihla ukusuka ekumelaneni ngokulunyulwa, kukhokelele kugxino lwe-milbemycin oxime ebisini. Iinjana ezincancisa la mabhinqa zibonise iziphumo ezinxulumene ne-milbemycin oxime (uxinzelelo, ukunciphisa umsebenzi, urhudo, ukomisa, ukukhupha impumlo). Uphononongo olulandelayo, oluvavanye ukulawulwa kwemihla ngemihla kwe-0.6X eyona thamo liphezulu lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM, ukusuka ekuzaleni kude kube kwiveki enye phambi kokulunyulwa, akubonakalisanga mpembelelo kubantu ababhinqileyo abakhulelweyo okanye kwiitter zabo. Isifundo, apho ababhinqileyo abakhulelweyo babedosiwe kanye, kwi-0.6X eyona ithamo lininzi lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM ngaphambili, ngomhla ka, okanye kungekudala emva kokudumba, kungakhange kubekho ziphumo kwiinjana.
Abanye abantwana abongikazi, kwi-2, 4, kunye neeveki ezi-6 ubudala, bahambisa iidosi zomlomo ze-9.6 mg / kg milbemycin oxime (3.8X eyona dosi iphakamileyo yokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM) ibonakalise ukungcangcazela, ubizo, kunye ne-ataxia. Zonke ezi ziphumo zidlulile kwaye iinjana zabuyela esiqhelweni ngaphakathi kwe-24 ukuya kwiiyure ze-48. Akukho ziphumo ziye zaqwalaselwa kwiinjana ezilawulwa yi-0.5 mg / kg ye-milbemycin oxime (ubuncinci beedosi zelebheli).
Uphononongo lokhuselo lwedosi ekhulayo olwenziwe kwiiCollies ezi-rated lukhokelele kwi-ataxia, pyrexia, kunye nokuphinda ubuye ngamaxesha athile kwenye yezinja ezilishumi elinesine ezilawulwa nge-milbemycin oxime kwi-12.5 mg / kg (5X eyona dose iphakamileyo ye-SENTINEL SPECTRUM). Phambi kokufumana idosi eyi-12.5 mg / kg ngosuku lwe-56 yesifundo, zonke izilwanyana zazifumene idosi yohlobo lwe-2.5 mg / kg ye-milbemycin oxime ngosuku lwe-0, ilandelwa yi-5.0 mg / kg ngosuku lwe-14, kunye ne-10.0 mg / kg Ngomhla wama-32. Akukho ziphumo zingathandekiyo ziye zaqwalaselwa kuyo nayiphi na iCollies ephathwe ngeedosi ezingaphantsi kwe-12.5 mg / kg.
Kwisifundo seenyanga ezilishumi, iidosi ze-lufenuron ukuya kuthi ga kwi-2X eyona ithamo lininzi lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM (10 mg / kg) ayibanga netyhefu egqithileyo. Idosi enye ye-200 mg / kg yayingenampembelelo kwizinja ezindala, kodwa yabangela ukwehla kwemisebenzi kunye nokunciphisa ukutya kwiinjana ezineveki ezisibhozo ubudala. Amacwecwe eLufenuron avavanywa ngolawulo olufanayo lwe-flea yabantu abadala abane-carbaryl, i-permethrin, i-chlorpyriphos kunye ne-cythioate. Akukho tyhefu ibangelwe yile ndibaniselwano. Amacwecwe eLufenuron awakhange abangele isithintelo se-cholinesterase kwaye awakhange anyuse i-cholinesterase inhibition ebangelwa kukuvezwa yi-organophosphates.
Iilebhu ezimbini kunye nezifundo ezibini ezilawulwa kakuhle zenziwa ukuvavanya ukhuseleko lokuzala kwamacwecwe e-lufenuron ekuzaleni izinja. Kwesinye sezifundo zaselebhu, apho i-lufenuron yenziwa khona kwizinja zeBeagle njengeedosi ezintathu ezahluliweyo, ezilingana ne-17.8X elona nani liphezulu lokuvezwa kwe-SENTINEL SPECTRUM (10 mg / kg), umlinganiso wamabhinqa e-gravid kubafazi abatshatileyo yayingu-8/8 okanye i-100% kwiqela lolawulo kunye ne-6/9 okanye i-67% kwiqela elinyangiweyo lwe-lufenuron. Inani elithetha ukuba intshontsho lenkunkuma yayizilwanyana ezibini eziphakamileyo kwi-lufenuron xa kuthelekiswa namaqela olawulo kwaye ubunzima bokuzalwa kwamantshontsho avela kwiibhetshi eziphathwayo kolu phononongo lwalungaphantsi kunamaqela olawulo. Ezi ntsana zikhule ngenqanaba elifanayo kwiiphuphu zolawulo. Izehlo zokukhutshwa kwempumlo, ukuxinana kwemiphunga, ukuhanjiswa sisisu / ukomisa, kunye nokonqena kwakuphezulu kwiqela labantwana abaphathwa lufunuron kunakwicala lokulawula iqela labantwana. Iziganeko zale miqondiso zazidlulile kwaye zincipha ngokuphela kwexesha lokuncancisa.
Iziphumo ezivela kwizifundo ezithathu zokhuselo lokuzala, ilabhoratri enye kunye nezifundo ezibini, ezivavanya iintlobo ezilishumi elinanye zezinja, khange zibonise naziphi na iziphumo ezibi zeparamitha zokuzala ezilinganisiweyo, kubandakanya ukuchuma, ubunzima bokuzalwa komntwana, kunye neempawu zeklinikhi, emva kolawulo lwe-lufenuron phezulu ukuya kwi-1X eyona dose iphezulu ye-SENTINEL SPECTRUM. Ubisi oluphakathi: umyinge wexinzelelo lwegazi wawumalunga ne-60 (okt, 60X ephezulu yokugxilwa kweziyobisi kubisi xa kuthelekiswa namanqanaba eziyobisi egazini leebhitches eziphathwayo). Iintsana ezabongikazi zilinganise amaxesha angama-8 ukuya kuma-9 aphezulu egazi le-lufenuron xa kuthelekiswa namadama abo.
Gcina kwindawo eyomileyo kubushushu begumbi elilawulwayo, phakathi kwe-59 ° kunye ne-77 ° F (15-25 ° C).
I-SENTINEL SPECTRUM iyafumaneka ngamandla amane, equlunqwe ngokobunzima benja. Amandla onke afumaneka kwiiphakheji ezinekhowudi enemibala yeetafile ezithandathu ezihlafunwayo nganye.
Yenziwe ngu: Virbac AH, Inc., P.O. Ibhokisi 162059. Ft. Ixabiso, TX 76161
I-NADA # 141-333, ivunywe yi-FDA
© 2016 IVirbac Corporation. Onke amalungelo agciniwe.
I-SENTINEL kunye ne-SPECTRUM ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo ze-Virbac Corporation.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele www.sentinelpet.com
Iipilisi ezihlaza okwesibhakabhaka zamadoda
IVIRBAC AH, INC.
P.O. IBHOKISI 162059, FORT WORTH, TX, 76161
Idesika yoMyalelo: Ngama-800-338-3659
Indawo yeWebhusayithi: https://us.virbac.com/
Kwenziwe zonke iinzame zokuqinisekisa ukuchaneka kolwazi lweSentinel Spectrum olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yase-US okanye into yokufaka iphakheji.
Ilungelo lokushicilela © 2021 Animalytix LLC. Ukuhlaziywa: 2021-08-30
Linganisa ii-Waves ze-elektroniki: Uyisebenzisa kanjani i-Oscilloscope
Ungalibola njani inani kwiiNqaku zalo eziPhambili
Ukurhoxiswa kweMaxitrol Ophthalmic
Uyibhala njani i-Sonnet
Ibhakteria Vaginosis (Gardnerella Vaginitis)
Izinto ezisongelayo ezinombhalo kwi-InDesign CS5
Uyilungiselela njani imifanekiso yeGIF kunye nePNG kwiiNdawo zeMithombo yeendaba yakho yeNtlalo
Ndi-3 (iNaproxen Sodium 220 mg)
Ngaba i-antibiotics ikwenza ube yindlala
I-benadryl yeetshathi yetshathi yentsana
I-hernia ngaphezulu kwesisu